Medjugorje: Holy Rosary, Nwanyị nwanyị anyị, efe ofufe, chekwaa ndị na-eto eto pụọ na ọgwụ
Paolo Tescione	Edere ya June 29, 2020
Uzo ozo nke Ave Maria bu akara nke ubochi ndi Cenacolo, ebe ndi mmadu nile mara ugbua maka iji ekpere dika ihe nnuru-ogwu. Sr kwuru, "Anyi na - ekpe Chapleti ugboro atọ nari, dika nri." Elvira, onye guzobere obodo. “Dika aru si zite aru oru, ekpere na-ejiko onu olile anya, udo, udo. Ọ dị mkpa ịnwe ụdị, anyị bụ Madonna ”.
N'ime afọ iri na ise nke ndụ, ndị Community anabatala puku mmadụ iri na ise riri ahụ riri ahụ maka ọgwụ ha site na iji ekpere, ọkachasị chaplet: “Nwanyị anyị nọ na Lourdes, na Fatima na Medjugorje tụrụ aro chaplet. O doro anya na n’ekpere a, enwere ikike dị omimi "na-aga n’ihu onye nọn Piedmontese," okpueze ahụ na-agwọ ọrịa psyche, ọ bụ ike na-agafe na veins. Ọ bụ ọnụnọ, ọ bụghị naanị akara. " Uzo eji eme ihe n’ime ulo iri abuo n’iile gbasasiri n’uwa dum bu Onye nke Kraist, tinye ya n’uzo: oburu na mmadu bu onyinyo nke Chineke, obu na o gha agha iru. Nke a bụ ya mere ha ji kpọọ ebe obibi ha "ụlọ akwụkwọ nke ndụ" na ọ bụghị "obodo ọgwụgwọ" yana kama "ọgwụgwọ" anyị na-ekwu maka "ụzọ mbilite n'ọnwụ". Kọwaa sr. Elvira “Anyị nwere iwu siri ike ma na-achọsi ike n'ihi na ụmụaka ga-amatarịrị obe ma mụta ịme ya. Anyị anaghị amanye ihe ọ bụla, anyị na-akwanyere nnwere onwe ha ùgwù, n'ihi na ezigbo nnwere onwe maara onye kere ha. Ọ bụ eziokwu ka anyị na-enye nwayọ ma d ị iche, mana ọgwụgwọ ezughi anyị, anyị chọrọ nzọpụta. Ọ bụrụ na anyị napụ ha ọgwụ ma laghachite n'enweghị ezigbo ebumnuche, ha enweghị olileanya. Echere na opekata mpe 15% nke ndị ọbịa n'obodo a na-agbake kpamkpam.
"Ubi nke Ndụ", ụlọ a mụrụ na Medjugorje afọ 9 gara aga, nwere ihe dịka ụmụaka 80 sitere na mba 18 dị iche iche. Ọnụnọ ha bụ eziokwu dị mkpa maka Medjugorje n'ihi na ọ na-agba akaebe "dịrị ndụ" ka Nwanyị nwanyị anyị bịara n'ezie zọpụta ụmụ ya, na n'etiti ndị a na-eto eto ndị dabara na ọgwụ ọjọọ, nnukwu ọrịa nke narị afọ a. "Mgbe ha putara, anyi nwere oriri ebe m n’eme ka ha obe na Chapleti: obe n’ihi na ha gha ezute ya ozugbo na Chapleti n’ihi na odighi mgbe ha gepu iche na ekpere”. Mana ọ bụghị onye ọ bụla na-ala, n'ezie enwere ọtụtụ "ndị ọrụ afọ ofufo maka ịhụnanya", ndị na-eto eto bibiri ọgwụ site na ndị ghọrọ ndị ozi ala ọzọ maka ndị ọzọ (ọbụna ụfọdụ na-ejikwa ụlọ na Brazil n'onwe ha).
Ha adighi atu egwu oru maka na ha mutara banyere nna Chineke nke na elebara inye nri anya kwa ubochi. N’ezie, onweghị onye na-akwụ ndị Community ụgwọ ma ọ bụ anabataghị onyinye ọha na eze n’ihi na ndị na-eto eto ghọtara na ọha mmadụ agaghị akwụ ụgwọ ha, mana onwe ha na àjà na ọrụ nke ntụkwasị obi na ntụkwasị obi nke Chineke dị n’aka ndị Cenacolo Community nwere ọtụtụ ndị ha na ha na-emekọ ihe. ndi n'enye onwe ha dika ihe eji enyere ha aka n'okwute uku a nke ihunanya: ndi mmadu, ndi di na nwunye, ndi nwoke na ndi nwanyi doro nsọ, ya na ndi ezi-na-ulo 800 ndi ghoro na ihunanya na-azoputa.
Nke gara aga Post Gara aga post:Mkparịta ụka mụ na Chineke "nwere okwukwe na m"
Next Post → Post ozo:Na-atụgharị uche taa banyere ihe ị na-eme banyere ihe isi ike na nsogbu nke ndụ gị